Vidim-bary any Sambava: 4.100 Ar ny kilaon’ny makalioka | NewsMada
Vidim-bary any Sambava: 4.100 Ar ny kilaon’ny makalioka
Tsy mitsaha-misondrotra ny vidim-bary any amin’ny distrikan’i Sambava. Lafo indrindra eto Madagasikara, ary anisan’izany ny vary avy any eto an-toerana. Araka ny tatitra navoakan’ny Foibe mpanara-maso ny vary, na “Observatoire du riz” (ODR lah: 512), farany teo, tafakatra 4.100 Ar ny kilao (1.200 Ar ny kapoaka) any an-toerana, nanomboka ny herinandron’ny 15 oktobra teo. Manodidina ny 2.800 Ar/kg kosa ny vary gasy tsotra.
Raha ny salanisa navoakan’ny tatitra, manome 3.450 Ar ny kilaon’ny vidim-bary any Sambava. Mora indrindra kosa ny vidin’ny makalioka any Toamasina I, 1.700 Ar/kg.
Eto an-dRenivohitra, manodidina ny 2.100 Ar hatramin’ny 2.200 Ar ny kilaon’ny makalioka, ary 2.000 Ar ny salambidy ankapobeny hita eny an-tsena, raha milaza fa 1.925 Ar/kg ny ODR. Manodidina ny 1.886 Ar ny salanisa satria mora ny vary tsipala, 1.795 Ar.
Tsy fantatra ny vokatra 2019
Azo heverina fa mbola hiakatra ireo vidim-bary eny an-tsena ireo satria ao anatin’ny maitsoahitra isika. Mihena ny tahirim-bary any amin’ny mpamboly, hiditra amin’ny fikarakarana ny taom-pambolena 2019 ho an’ny vary vakiambiaty. Amin’ny faramparan’ny desambra ho avy izao vao hanomboka hiakatra ny varialoha, hatramin’ny febroary 2019. Amin’ny fiandohan’ny volana mey 2019 kosa vao hanomboka hiakatra ny vakiambiaty.
Tsy fantatra ny voka-bary amin’ity taom-pambolena ity satria tsy mbola mirotsaka ny orana, tsy voavinavina ny fahatongavan’ny rivodoza hiteraka tondra-drano. Raha ny tombatomban’ny mpamantatra ny toetr’andro, mety hahery vaika ny orana, na ny rivodoza , amin’io taona 2019 io.